Nọrọ nso Gaa Ebe Ochie »Mahadum Hodges
Tag: Nọrọ Nso Ga
Sonye na anụ ụlọ anyị na onyinye inye onyinye Ka anyị kwado obodo anyị wee nyere ndị ọzọ aka! Mahadum Hodges esorola Harry Chapin Food Bank na Brooke's Legacy Animal Rescue, kpokọta ihe maka ezinụlọ ndị nọ ná mkpa na ndị enyi anyị na-ewe iwe. Sonyere anyị site na inye onyinye site na June 1st - June 15th, 2020. Can nwere ike ịme A [...]	GỤKWUO
Hodges Alumnus na-enweta onyinye onyinye nke Onye isi oche Naples
Daalụ, Dave Weston! Hodges Alumnus na-anata Onyinye Onye isi oche Naples, Dave Weston, onye isi ndị isi na Naples Lumber & Supply, bụ onye natara 2019 nke onyinye Onye isi oche nke Naples. A na-asọpụrụ Weston maka nraranye ya maka ịkwalite obodo na nkwado na-aga n'ihu nke ụlọ ahụ. A ga-amata ya na Chamber [...]	GỤKWUO
Njikọ dị n'etiti Mmụta Kasị Elu na Ndị Ọrụ
Akwụkwọ, Ndụ Campus
Onye dere ya: Dr. John Meyer, Onye isi ala, Mahadum Hodges Site na ogo isii nke nkewa, ị nwere ike ịme njikọ na-enweghị atụ. Njikọ dị n'etiti agụmakwụkwọ ka elu na ndị ọrụ ọrụ bụ kpọmkwem. Na Mahadum Hodges, anyị ghọtara njikọ dị n’etiti agụmakwụkwọ na nka nka wee hazie ogo na asambodo anyị iji mejupụta mkpa ndị ọrụ nke anyị [...]	GỤKWUO
Nhọpụta ọhụụ nke VP nke Ọzụzụ
Akwụkwọ, Ndụ Campus, Ngalaba & Ndị ọrụ
Ekele Marie Collins! Hodges na-ahọpụta Onye isi VP nke Mmụta Mmụta ka akpọrọ Dr. Marie Collins onye osote onye isi oche nke agụmakwụkwọ na Mahadum Hodges. N'ebe a, ọ ga - enyere aka ilekọta akụkụ agụmakwụkwọ nke mahadum, gụnyere mmepe na ntinye nke ịkwalite mmụta na ogo dị ugbu a, na mgbakwunye na ịmalite ọhụụ [...]	GỤKWUO
Anyị ji obi ụtọ na-eweta Nọọsụ 2019 anyị!
Akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ
Ekele anyị Nọọsụ 2019! Na Mee 10th, 2019, Mahadum Hodges nwere obi ụtọ ịnabata Pinning Ceremony maka ndị nọọsụ gụsịrị akwụkwọ n’afọ a. Gịnị a kediegwu ụzọ usọrọ Nọọsụ Izu! Anyị Pinning ememe bụ a pụrụ iche oge maka anyị nọọsụ na 2019 nnọkọ bụ ihe ọzọ ahụkebe omume. Nọọsụ ọ bụla rụsiri ọrụ ike iru [...]	GỤKWUO
Nwa Atụrụ a kwalitere na AVP Student Financial Services
Ndụ Campus, Ngalaba & Ndị ọrụ
Ekele maka nkwalite ahụ, Noa! A kwalitere Noa Nwa atụrụ ka ọ bụrụ onye na-esote onye isi oche nke Ọrụ Ọrụ Ndị Mmụta na Mahadum Hodges. N'ebe a, Noa na-eduzi ọrụ niile nke Ọrụ Ego Mmụta, gụnyere enyemaka ego, ọrụ ndị agha, ọrụ inyeaka na akaụntụ nnabata. Tupu nkwalite ya, ọ bụ Director nke Student Account Services and Auxiliary Operations [...]	GỤKWUO
Zonta Honor Na ikike Omume A Ọma
Ontalọ ọrụ Zonta nke nsọpụrụ na ikike nyere ndị Naples nke emere na Mahadum Hodges bụ nnukwu ihe ịga nke ọma! Ndị isi obodo na ndị sonyere na Naples Campus anyị na Eprel 18, 2018, iji mụtakwuo banyere ike onwe ha na obodo ha na mmemme Zorọpụrụ na Ikike. Hodges 'nwere obi ụtọ ịnabata ihe omume a na mmekorita ya na [...]	GỤKWUO
Ndụ Campus, Schools
Hodtù Executive Executive University na-eme Ememme Red Chair Movement (LR) Teresa Araque, AVP Marketing / PIO; Dr. John Meyer, Onye isi ala; Erica Vogt, Executive VP nke Nlekọta Ọrụ; Tracey Lanham, Associate Dean, Fisher School of Technology; na Dr. Marie Collins, Onye Isi VP nke Ọmụmụ Ihe. Dabere na sitwithme.org, A na-akpọkwa Red Chair ije dị ka Sit With [...]	GỤKWUO
Joe Turner Onye isi ndi isi akwukwo nke ndi ozo
Nabata, Joe Turner! Obi Dị Anyị Totọ Maka Inwe Gị. Turner akpọrọ Senior Marketing na Alumni Outreach Content Onye Okike na Mahadum Hodges Eprel 10, 2019 –NAPLES / FORT MYERS, FLA - Joe Turner alaghachila na Mahadum Hodges dị ka Senior Marketing na Alumni Outreach Content Creator. N'ebe a, ọ bụ ọrụ ya maka ilekọta mmemme nke ndị okenye na mahadum, na mgbakwunye na ịmepụta […]
Ekele ụmụ akwụkwọ EMS
Studentsmụ akwụkwọ EMS Hodges weghaara 1st Ebe! Mụ akwụkwọ si na Mmemme Ahụike Mberede Mahadum Hodges asọmpi na nke isii kwa afọ Panther EMS Challenge na Lake Worth, FLA na ngwụcha izu a. Ihe omume a bụ nke Palm Beach State College kwadoro. E kpere ndị otu si n'ofe steeti ikpe n'ọtụtụ ọnọdụ mberede. N'ime ìgwè 18 na [...]	GỤKWUO